င ဝန် န ဒီ: November 2013
The aircraft, which were unarmed, had taken off from Guam on Monday and the flight was part ofaregular exercise in the area, US defence officials said. Both planes later returned to Guam.
US Defence Secretary Chuck Hagel called ita"destabilising attempt to alter the status quo in the region". The White House said it was "unnecessarily inflammatory".
Singapore Airlines and Australia's Qantas have both said they will abide by the new rules.
Posted by ငဝန်နဒီ at 8:10 AM No comments:
ဖူကူရှိမာက ကလေးများတွင် သိုင်းရွိုက်ကင်ဆာ ဖြစ်ပွားနှုန်း မြင့်မား
Published on November 11, 2013 by ဒီဗွီဘီ
ဂျပန်နိုင်ငံ ပစိဖိတ်ကမ်းရိုးတန်းပေါ်မှာရှိတဲ့ ဖူကူရှီမာက သုတေသနပညာရှင်တွေက အဲဒီက ကလေးတွေမှာ သိုင်းရွိုက်ကင်ဆာ ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းဟာ မျှော်လင့်ထားတာထက် ပိုပြီး မြင့်မားနေတယ်ဆိုတာကို တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ထင်ရှားတဲ့ သိုင်းရွိုက် ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ဟောင်းတယောက်ကတော့ ဖူကူရှီမာက ကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုတွေရဲ့ အရေအတွက်ဟာ မျှော်လင့်ထားတာထက် မြန်ဆန်လာနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါပေမယ့် နောက် ကင်ဆာအထူးကု ဆရာဝန်တယောက်ကတော့ အဲဒီ မြင့်မားလာမှုဟာ ကျယ်ပြန့်ပြီး အသေးစိတ် စစ်ဆေးရှာဖွေနိုင်မှုရဲ့ ရလဒ်ပဲ ဖြစ်ပြီး ဘယ်သူမှ အထိတ်တလန့် မဖြစ်သင့်ပါဘူးလို့ ပြောပါတယ်။
အသက်၂ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ယူတာကို အီကီကတော့ သူနာပြုက သူလည်ပင်းကို ရှာဖွေတဲ့ ကိရိယာသုံးပြီးပြီး စစ်ဆေးဖို့ ကြိုးစားတဲ့ အခါတိုင်း သူက ငိုယို ကန်ကျောက်ပြီး ကုတင်ပေါ်က လျော့ချ ဆင်းပြေးဖို့ ကြိုးစားလေ့ ရှိပါတယ်။
သူအမေ တိုမိုကိုကို အိကီက ယူတာနဲ့ အသက် ၄ နှစ်သမီး သူအမ ဆာကီကို သိုင်းရွိုက် ဂလင်း စမ်းသပ်စစ်ဆေးဖို့ ခေါ်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အနားက ဖူကူရှီမာ နျူကလီးယားစက်ရုံက ထွက်လာတာတွေကို ကြောက်နေတယ်လို့ တိုမိုကိုကို အိကီက ပြောပါတယ်။
“ကျမက စိတ်ပူပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ ကျန်းမာကြတယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ သူတို့ ကျန်းမာရေးကောင်းကြတယ်လို့ မျှော်လင့်ထားပါတယ်။”
နျူကလီးယား ပျော်ကျမှု မဖြစ်ခင်က ကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ ဖူကူရှီမာက ကလေးတွေမှာ ကင်ဆာ ဖြစ်ပွားမှုကို ကလေး ၁ သန်းမှာမှ ၁ ယောက်၊ ၂ ယောက်လောက်ပဲ ရှိတယ်လို့ ခန့်မှန်းခဲ့ကြပါတယ်။
ဘေးသင့်မှု ဖြစ်ပြီးကတည်းက ဖူကူရှီမာဒေသအစိုးရက အကြီးစား အသေးစိတ် စစ်ဆေး ကြည့်ရှုမှု အစီအစဉ်တခုကို အကေင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။
ကလေး ၂ သိန်းလောက်ကို စစ်ဆေးရာမှာ သိုင်းရွိုက်ကင်ဆာ ဖြစ်ပွားတာ သေချာတဲ့ ကလေးက ၁၈ ယောက် ရှိနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဖြစ်ပွားတယ်လို့ သံသယရှိတဲ့ ကလေးက ၂၅ ယောက် ရှိနေပါတယ်။ မမျှော်လင့်လောက်အောင် မြင့်မားလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
နာဂါနိုမှာ ရှိတဲ့ မတ်ဆူမိုတိုမြို့ရဲ့ မြို့တော်ဝန် အကီရ ဆူဂီနိုရဟာ ချာနိုဘိုင်းလ် ဘေးသင့်မှုဖြစ်အပြီးမှာ သိုင်းရွိုက်ကင်ဆာ ဖြစ်လာကြတဲ့ ယူကရိန်းနဲ့ ဘီလာရုစ်က ကလေးတွေကို ၅ နှစ် ကြာ ပြုစု ကုသပေးခဲ့တဲ့ လေးစားမှု ရရှိထားတဲ့ သိုင်းရွိုက် ခွဲစိတ်ဆရာဝန် တယောက် ဖြစ်ပါတယ်။
“ဖူကူရှီမာမှာ အခု ကျနော် ကြည့်လိုက်တော့ ကလေးတွေရဲ့ သိုင်းရွိုက်ကင်ဆာ ဖြစ်ပွားတဲ့ အရေအတွက်က တော်တော် မြင့်မားနေပါတယ်။ ဖူကူရှီမာက ဆရာဝန်တွေကတော့ ဒီလောက် ပေါ်လာတာ မမြန်သင့်ဘူးလို့ ပြောကြပါတယ်။ သူတို့ ဆိုလိုတာကတော့ မတော်တဆ ဖြစ်ပွားမှုနဲ့ မသက်ဆိုင်ဘူးလို့ ပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမယ့် အဲဒါက တော်တော်ကို သိပ္ပံနည်းမကျတာဘဲဗျ။ နောက် ကျနော်တို့ လက်ခံနိုင်လောက်တဲ့ အကြောင်းပြချက် မဟုတ်ဘူးလေ။”
ဒါပေမယ့် တခြားက ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကတော့ ဘာမှ ကြောက်စရာ မရှိပါဘူးလို့ ပြောကြပါတယ်။
လန်ဒန် အင်မ်ပီးရီးရဲလ်ကောလိပ်က ကင်ဆာ မော်လီကျူလာ ရောဂါဗေဒ အထူးကုဆရာဝန် ပါမောက္ခ ဂျရယ်လ်ဒင်း ထောမတ်စ်က “ဖူကူရှီမာပြီးရင် ဂျပန်မှာ သိုင်းရွိုက်ကင်ဆာ ဖြစ်ပွားမှု မြင့်လာနိုင်မလားလို့တော့ ကျမ သံသယရှိတယ်” လို့ ပြောပါတယ်။
သူက ၁၉၈၆ ခုနှစ် နျူကလီးယား ဘေးသင့်မှုဖြစ်အပြီး ဓာတ်ရောင်ခြည် ဒဏ်သင့်ခံခဲ့ရသူတွေဆီက နမူနာတွေကို လေ့လာနေတဲ့ ချာနိုဘိုင်းလ် တစ်ရှုးဘဏ်ကို ကူညီ တည်ထောင်ပေးခဲ့သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
သူက ဖူကူရှီမာက ကလေးတွေကြားမှာ သိုင်းရွိုက်ကင်ဆာ ဖြစ်ပွားနေမှု မျှော်လင့်တာ ထက် ပိုမြင့်မားနေတာမှာ ရိုးရှင်းတဲ့ အကြောင်းတခု ရှိမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
“ရှင်တို့ ပြဿနာတရပ်ကို ရှာမယ်ဆိုရင် အထူးသဖြင့် ဂျပန်လူမျိုးတွေ တကယ် လုပ်နေတဲ့ မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် အသေးစိတ်ကျတဲ့ နည်းပညာကို အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် တခုခုတော့ ရှင်တို့ တွေရပါလိမ့်မယ်။”
သိုင်းရွိုက်ကင်ဆာကို စောစော စုံစမ်းစစ်ဆေးတာဟာ အရေးအကြီးဆုံး ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ကိုတော့ လူတိုင်းက သဘောာတူ ထားကြပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲဒါက အစောပိုင်းအဆင့်တွေမှာ တွေ့ရှိမယ်ဆိုရင် အဲဒါကို အမြဲတမ်းအောင်မြင်အောင် ကုသပေးနိုင်တာ များပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဖူကူရှီမာကျန်းမာရေးဌာန တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ ကိုယ်ရေး အကြောင်းပြချက်တွေ ပြပြီး ရိုးရိုး သိုင်းရွိုက် ကင်ဆာရောဂါ ခံစားနေရသူတွေ ရဲ့ အသက်အရွယ် ရှင်းလင်းချက် ထုတ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုမှုကိုတောင် ငြင်းဆန်ပြီး ကျိတ်လုပ်နေကြပါတယ်။
ဒီ အခြေခံ အချက်အလက်တွေကို မျှဝေပေးဖို့ ငြင်းဆန်မှုဟာ သိုင်းရွိုက် အထူးကု ဆရာဝန် အကီရ ဆူဂီနိုရရဲ့ သံသယတွေကို ပိုပြီး တိုးများ လာစေပါတယ်။
“ကျနော် စိတ်ဆိုးနေတုန်းပဲဗျ။ ကျနော် ထင်တယ်။ သူတို့မှာ အဲဒီ အချက်အလက်တွေ ရှိတယ်ဗျ။ တော်တော်ထူးဆန်းတယ်ဗျာ။ သူတို့ အဲဒါကို ဘာလို့ ထုတ်မပေးဘဲ ထားတာလဲ။”
လျှို့ဝှက်ထားတာက သိုင်းရွိုက်ဒေတာတွေပဲ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒေသတွင်းက ကလေးတွေကို အသေးစိတ် စစ်ဆေးထားတယ်လို့ အပြောခံထားရတဲ့ ဖူကူရှီးမားပညာရှင်အုပ်စုရဲ့ အစပိုင်း ဆွေးနွေးပွဲတွေကိုလည်း လျှို့ဝှက်ထားခဲ့တာာ ဖြစ်ပါတယ်။
နျူကလီးယားစက်ရုံက ထွက်လာတာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူတို့ရဲ့ ကလေးတွေကို ထိခိုက်မှာ စိုးရိမ်နေတဲ့ တိုမိုကိုကို အိကီလိုကတော့ ဒါဟာ ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ကိစ္စတခုလို့ ပြောပါတယ်။
“သူတို့က ကျမတို့ကို အားလုံး ပြောပြမယ်လို့ မထင်ပါဘူးရှင်။ ကျမကတော့ သူတို့ ပြောတာကို မယုံနိုင်ပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် ကျမ ကလေးတွေရဲ့ အနာဂတ်ကို စိတ်ပူနေရတာပေါ့။ အဲဒါက ကျမကို စိတ်ဆင်းရဲပါတယ်။”
တိုမိုကိုကို အိကီရဲ့ ပူပင်ကြောင့်ကျမှုတွေကို ထပ်ဖြည့်ပေးလိုက်တာကတောာ့ သူရဲ့၎ နှစ် သမီး ဆာကီရဲ့ သိုင်းရွိုက်ဂလင်းမှာ အရည်အိတ်တွေ တွေ့ရှိလိုက်တာပါပဲ။
ကင်ဆာလို့ သဘောထားလို့ မရသေးပေမယ့် အရည်အိတ်တွေကို လအတော်များများ စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးရပါလိမ့်မယ်။ နှစ်အတော်ကြာ အထိလည်း ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အာရှဒေသ အစီအစဉ်အတွက် သတင်းထောက် Mark Willacy က သတင်းပေးပို့ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
တိုကျို စက်ဘီးပွဲ လေးသွားကြည့်ပြီး တွေ့ မိတာလေးပါ
တိုကျို ဘူတာက နေ Kaihinmakuhari Station အထိ Keio Line စီးသွားရပါမယ် အနှေးနဲ့ ဆို ၃၈ မိနစ်ကြာပါတယ် အမြန်နဲ့ ဆို ၃၀ မိနစ်ပဲကြာပါတယ်
ဝင်ကြေးကတော့ online ကနေဆိုရင် ယန်း၁၀၀၀ ပါပဲ
အဲဒီရောက်မှ ဝယ်ရင် ယန်း၁၂၀၀ ကျပါတယ်
အထဲမှာတော့ စက်ဘီးတွေ နမူနာစီးကြည့် လို့ ရပါတယ်
စက်ဘီးတွေကတော့ နိူင်ငံတကာ အကောင်းတွေ များပါတယ် ယန်း ၁၈ သောင်း ကနေ ယန်း ၁၀ သိန်းကျော်တွေ ကများပါတယ်မြန်မာငွေ နဲ့ ဆို ၁၈ သိန်း ကနေ သိန်း ၁၀၀ ကျော်ကျော် အထိ ရှိပါတယ်
ကာဗွန်စက်ဘီး တစ်ချို့ ကိုတော့ ယန်း၃၅ သောင်း လောက်နဲ့ ရနိူင်တာပါမြန်မာငွေ နဲ့ ဆို ၃၅ သိန်းပါ
လေထိုးစရာမလိုတဲ့ စက်ဘီးလေးပေါ့ သံစူးတာလည်းမပူရပါဘူး ပေါ့ပေါ့လေးပါ
စက်ဘီး မော်ဒယ် မိန်းကလေးပါ အီတလီ စက်ဘီး ကြော်ငြာပေးနေတာပါ
မြန်ပြည်သား အတွက် ညီမျှခြင်း
မြန်ပြည်သားတိုင်း လက်နက်ကိုင်ဖူးအောင် ရေးထားပြီ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ တွေ ကို လည်း ပုံမှန် အတိုင်း ဆက်ကိုင် နိူင်ဖို့လို တယ်လို့ ဖြစ်နေမှာပါ
တပ်မတော် က အရပ်ဖက်အောက်ရောက်ဖို့ ပြောလိုက်တာ ငြိမ်းချမ်းရေးဖျက်ဖို့ ဖြစ်မှာစိုးလို့ ပါ အဲလို ဆို ရင် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တွေ ရော အရပ်ဖက်အောက်မှာ နေ နိူင်မှာပေါ့
မဖြစ်နိူင်ရင် အခု အဆင်ပြေမဲ့ အရာတွေ အတွက်ဖျက်မြင်းဖြစ်နေမှာပါ
တပ်မတော် အာဏာသိမ်းမှာ ကြောက်လို့ ကြိုကာတာ ဖြစ်ပေမဲ့
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တွေ ကိုယ့်တိုင်းရင်းသား အရပ်သား အောက်မှာ ရပ်တည်နေနိူင်ရင်ပေါ့
ပြည်ထောင်စု တပ်မတော် ဖြစ်လာရင်တော့ အရပ်သားအောက်မှာ ထားတာ ဖြစ်နိူင်ပေမဲ့ ဝေးနေပါသေးသလို စောနေ ပါသေးတယ်
အခု က ပုံမှန် အတိုင်း လုပ်နေ လူတိုင်း တိုင်းရင်းသား တိုင်း တိုင်းပြည် အတွက် လုပ်ပေးရင်း လက်နက်ကိုင် တနှစ် အလုပ်လုပ်ရင်း မြန်ပြည် အနာဂတ် မြန်ပြည်သား လက်နဲ့ ရေး မှဖြစ်တော့မှာပါ
လက်နက် ကိုင် သူတိုင်း အရပ်သားကြောက်နေရတာ ကို ဖယ်ရှားဖို့ က လူငယ်တိုင်း လက်နက် ကိုင်တတ် အောင် သင်ပေး ပြီး အားလုံး တန်းတူ လက်နက်လက်နက် ချင်း ဖြေရှင်းမယ်ဆို လူတိုင်းဖြေရှင်း နိူင်ဖို့ ပါ
မြန်ပြည်သားတိုင်း လက်နက်ကိုင်ဖူးပြီး တန်းတူ လူ့ အခွင့်အရေး ရဖို့ ပါ
တန်းတူ အခွင့်အရေး ကို လက်တွေ့ ပေါ်ပေါက်လာနိူင်ပါစေ။ ။
Posted by ငဝန်နဒီ at 12:07 AM No comments:
Civil Defence မွေးဖွာခြင်း (သို့ )မြန်ပြည်သားတိုင်းဒီမိုကရေစီရယူခြင်း( သို့ )စစ်မဲ့မြန်ပြည်
မြန်ပြည် အနာဂတ် စစ်မဲ့ တိုင်းပြည် ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးသလို ဒီမိုကရေစီအသီးအပွင့် လူတိုင်းလက်ထဲ အမြန်ဆုံးနည်း ရောက်ဖို့ကတော့ Civil Defence တည်ထောင်ဖို့ လို ကို လို နေတာပါ
ပြည်သူ့ စစ် ကို မဆိုလို ပါ
ငြိမ်းချမ်းရေး ကို မဆိုလိုပါ
တပ်မတော်နဲ့ လည်း မဆိုင်ပါ
တိုင်းရင်းသား လက်နက် ကိုင်တွေ ကို မဆိုလိုပါ
သို့ သော် အကူအညီ ဆန်ဆန် အဖွဲ့ စုံမှ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံပါ ဖေးမမူနှင့် အတူ တပ်မတော်မှ လည်း တချို့ သော် စနစ် ကို ပြသရင်း Civil Defence ကို ပြည်သူ တွေကို ကူညီကာကွယ် ဖို့လူငယ်တိုင်း အသက် ၂၀ မကျော်ခင် အသက် ၁၆နှစ် ကနေ အသက် ၂၀ အတွင်း တနှစ် Civil Defence တွင် တာဝန် ယူရမည်ဖြစ်ပြီး အသက် ၂၀ ပြည့် ပြီး သည်နှင့်စီစစ်ပြီးတာဝန်မထမ်းပျက်ကွက်သူ ကို ၁ နှစ် ထောင်ဒဏ် အသက် ၂၂ မပြည့် လုပ်ဆောင်ပါက Civil Defence ဝင်ခြင်းက တိုင်းပြည်တာဝန်ယူခြင်းဖြစ်ပြီး မလုပ်ဆောင်သူ က တိုင်းပြည် ပုန်ကန်သူ ဖြစ်ပေလိမ့်မည်နိူင်ငံသားတိုင်း မပျက်ကွက်သင့်ပေ။
ပျက်ကွက်သူ သည် အစိုးရဝန်ထမ်းမဖြစ်စေရ
ကာကွယ်ရေး တွင် ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းမရှိစေရ
လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အရွေးချယ်ခံ မဖြစ်စေရ မဝင်ရောက်စေရ
တိုင်းပြည် သားတိုင်း ပြည်နယ် တိုင်းအလိုက် တစ်လ တစ်ပြည်နယ် တစ်တိုင်းနှူန်း တနှစ်ပြည့် သည်အထိ လှည့် တာဝန်ယူ ကာကွယ် သည့် Civil Defence တွင် ဝင်ရောက်လျှင် မြန်ပြည်သား မြန်ပြည်သူ တိုင်း လက်နက်လည်း ကိုင်တတ် ကူညီတတ်သူ တွေ ဖြစ်လာမည်ဖြစ်ပြီး လူတိုင်း လက်နက် ကိုင်အဖွဲ့ အစည်း တိုင်း အားလုံး နှင့် တန်းတူ ဖြစ်လာပေမည်
မြန်ပြည် သူ မြန်ပြည်သား တိုင်း ဒီမိုကရေစီအသီးအပွင့် ကို ခံစားရင်း ပြည်ထဲရေးရော မီးသတ်ရော ကြက်ခြေနီရောကူညီရာရောက် လက်နက်ကိုင်နည်း စနစ်ကိုလည်းသင် တစ်နှစ်လက်နက်ပါ ကိုင်ခွင့် ရပြီး
စာမတတ် လူငယ်ရှိပါက စာပါသင်ပေးပြီးဖြစ်
တိုင်းပြည်အနာဂတ် မြန်ပြည်သူ မြန်ပြည်သား လက်ထဲမှာရှိပြီး
စစ်တပ် က တိုင်းပြည်ကာကွယ်ရေး ထို့ အတူ တိုင်းရင်းသား လက်နက်တွေကလည်း မိမိ ပြည်နယ်မှာ လက်နက်ကိုင် သို့ သော် Civil Defence ကို အကန့် အသတ်ဖြင့် ပြည်နယ်တိုင်း ပေါင်းစုံ ကာကွယ်ရေး နေရာ တစ်ချို့ ကို ခွင့်ပြုသင့် သလောက် ခွင့် ပြုလျှင်မြန်ပြည် ဒီမို ကရေစီ မြန်ပြည် မှာ ရေးနိူင်ပေမည်။ ။
ဖူကူရှိမာက ကလေးများတွင် သိုင်းရွိုက်ကင်ဆာ ဖြစ်ပွား...
Civil Defence မွေးဖွာခြင်း (သို့ )မြန်ပြည်သားတိုင်...